132s Nei maRepublican aya achipikisa reSenate&#39;s coronavirus stimulus bumbiro images and subtitles
-Rudzi rwedu rwakavakirwa pachiremerera chebasa. Zvinoitwa bhiri iri, pasina kuzvigadzira, zvinongoti iwe unogona kuwana mari yakawanda nekuva pabasa kupfuura zvaunogona uchishanda. Icho chinhu chinokurudzira icho chiri chakatsauka. Hatigone kuve takananga kukurudzira vanhu kusashanda uye kuita mari yakawanda pane kudzokera kubasa uye ugogamuchira yako yakajairika pay. -Upa iyi bhajeti, iyo iyo mazana matanhatu emadhora kubhadhara pamusoro pezvibatsiro zvehurumende chaizvo zvinotendera kuti vanhu vawane mari yavanotambira yakapetwa kaviri mune mamwe mamiriro. Uye ndinoda kubatsira vanhu. Ndinoda kuva nechokwadi chekuti, kana ukarasikirwa nebasa rako, kuti isu tirege mubairo wako. Asi pasi pebhiri iri, iwe unowana $ 23.15 paawa, maringe neawa makumi mana ebasa revhiki, kwete kushanda. -Iri nharo dzekuti kana kwete tiri kuzorega zvisina kunaka kunyorwa bhiri gogodzai nyika ino zvichiri kuoma mumwedzi iri kuuya nekusawedzera basa kusaziva. Ndozvinoita kupokana uku. Saka isu tinoda kuita chimwe chinhu chiri nyore. Tinoda kugadzirisa zvakatyorwa pano nekutaura kuti inshuwarheni yekusashanda inobatsira anofanira kubiwa pa100% yemubhadharo wawaive nawo usati waita basa. Izvi hazvisi zvevanhu vakatogadzirwa. Izvi ndezve vanhu vari kuzoitwa vasina mabasa mumavhiki anouya. Kugadziridzwa uku kwese kunotaura kuti tiri kuvhota mumaminitsi mashoma ndeyekuti isu tinofanirwa kubhaputa mibairo yekushaikwa pa100% yemubhadharo iwe wanga uchangogamuchira paunenge uchishanda. -Upa mari iyi, sezvazvakanyorwa zvino, hurumende ichabhadhara vanhu vazhinji vekuAmerica kuva pane rubatsiro rwehurumende pane zvavaigona kuita kana vaishanda pabasa ravo chairo. Ini ndinotsigira kuwedzera chirongwa cheinishuwarenzi chekusashanda. Iyo ndiyo yakanakisa uye inokurumidza nzira yekuwana mari kune vanhu vanozvida zvakanyanya. Asi isu hatifanire kugadzira system uko kushaikwa kweinishuwarenzi kunobatsira yakakwirira kupfuura mubairo. Hatigone kubhadhara vanhu zvakanyanya kuti vasashande pane kushanda. Uku ndiko kufunga kwakajairika.
Nei maRepublican aya achipikisa reSenate&#39;s coronavirus stimulus bumbiro
< start="0.1" dur="5.1"> -Rudzi rwedu rwakavakirwa pachiremerera chebasa. >
< start="5.2" dur="3.768"> Zvinoitwa bhiri iri, pasina kuzvigadzira, >
< start="8.968" dur="4.366"> zvinongoti iwe unogona kuwana mari yakawanda >
< start="13.334" dur="2.534"> nekuva pabasa >
< start="15.868" dur="3.033"> kupfuura zvaunogona uchishanda. >
< start="18.901" dur="4.433"> Icho chinhu chinokurudzira icho chiri chakatsauka. >
< start="23.334" dur="5.367"> Hatigone kuve takananga kukurudzira vanhu >
< start="28.701" dur="3.432"> kusashanda uye kuita mari yakawanda >
< start="32.133" dur="5.167"> pane kudzokera kubasa uye ugogamuchira yako yakajairika pay. >
< start="37.3" dur="2.534"> -Upa iyi bhajeti, iyo iyo mazana matanhatu emadhora kubhadhara >
< start="39.834" dur="2.1"> pamusoro pezvibatsiro zvehurumende >
< start="41.934" dur="3.4"> chaizvo zvinotendera kuti vanhu vawane mari yavanotambira yakapetwa kaviri >
< start="45.334" dur="1.733"> mune mamwe mamiriro. >
< start="47.067" dur="1.2"> Uye ndinoda kubatsira vanhu. >
< start="48.267" dur="2.866"> Ndinoda kuva nechokwadi chekuti, kana ukarasikirwa nebasa rako, >
< start="51.133" dur="2.334"> kuti isu tirege mubairo wako. >
< start="53.467" dur="4.9"> Asi pasi pebhiri iri, iwe unowana $ 23.15 paawa, >
< start="58.367" dur="3.2"> maringe neawa makumi mana ebasa revhiki, kwete kushanda. >
< start="61.567" dur="2"> -Iri nharo dzekuti kana kwete >
< start="63.567" dur="2.633"> tiri kuzorega zvisina kunaka kunyorwa bhiri >
< start="66.2" dur="3.467"> gogodzai nyika ino zvichiri kuoma mumwedzi iri kuuya >
< start="69.667" dur="3.8"> nekusawedzera basa kusaziva. >
< start="73.467" dur="1.7"> Ndozvinoita kupokana uku. >
< start="75.167" dur="1.866"> Saka isu tinoda kuita chimwe chinhu chiri nyore. >
< start="77.033" dur="2"> Tinoda kugadzirisa zvakatyorwa pano >
< start="79.033" dur="2.634"> nekutaura kuti inshuwarheni yekusashanda inobatsira >
< start="81.667" dur="2.4"> anofanira kubiwa pa100% >
< start="84.067" dur="2.5"> yemubhadharo wawaive nawo usati waita basa. >
< start="86.567" dur="3.267"> Izvi hazvisi zvevanhu vakatogadzirwa. >
< start="89.834" dur="2.6"> Izvi ndezve vanhu vari kuzoitwa vasina mabasa >
< start="92.434" dur="1.5"> mumavhiki anouya. >
< start="93.934" dur="3.4"> Kugadziridzwa uku kwese kunotaura kuti tiri kuvhota mumaminitsi mashoma >
< start="97.334" dur="2.467"> ndeyekuti isu tinofanirwa kubhaputa mibairo yekushaikwa >
< start="99.801" dur="4.332"> pa100% yemubhadharo iwe wanga uchangogamuchira paunenge uchishanda. >
< start="104.133" dur="1.867"> -Upa mari iyi, sezvazvakanyorwa zvino, >
< start="106" dur="1.767"> hurumende ichabhadhara vanhu vazhinji vekuAmerica >
< start="107.767" dur="1.7"> kuva pane rubatsiro rwehurumende >
< start="109.467" dur="2.434"> pane zvavaigona kuita kana vaishanda pabasa ravo chairo. >
< start="111.901" dur="3.7"> Ini ndinotsigira kuwedzera chirongwa cheinishuwarenzi chekusashanda. >
< start="115.601" dur="2.399"> Iyo ndiyo yakanakisa uye inokurumidza nzira yekuwana mari >
< start="118" dur="2.133"> kune vanhu vanozvida zvakanyanya. >
< start="120.133" dur="1.801"> Asi isu hatifanire kugadzira system >
< start="121.934" dur="2.066"> uko kushaikwa kweinishuwarenzi kunobatsira >
< start="124" dur="2.334"> yakakwirira kupfuura mubairo. >
< start="126.334" dur="3.133"> Hatigone kubhadhara vanhu zvakanyanya kuti vasashande pane kushanda. >
< start="129.467" dur="1.501"> Uku ndiko kufunga kwakajairika. >